Home Wararka Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay degmada Qoryooleey
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay degmada Qoryooleey
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo la hadlay Wakaalada Wararka ee SONNA ayaa sheegay in xalay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen degmadda Qoryooleey qasaare loogu geestay.
Guddoomiye Maxamed Ibraahim Barre ayaa sheegay in Ciidamada Xoogga dalka ay Khasaaro xooggan gaarsiiyeen Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday,isagoona tilmaamay in todobo ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday la dilay halka tiro intaasi ka badan la dhaawacay.
Ciidamada Xoogga dalka ayaa dhawaan la wareegay deegaanada Jilib-Marka iyo Gandarshe ayuu Guddoomiyaha Gobolku sheegay in hadda xaaladooda amni ay wanaagsan tahay,islamarkaana suurta gelisay in Al-Shabaab laga saaro dhulka xeebaha ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Mudane Maxamed Ibraahim Barre ayaa sheegay in hadda uu socdo qorshemaleeshyada Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ku teedsan Wabiga,maadama uu soo dhammaaday qorshihii deegaanada Xeebta Al-Shabaab looga soo saarayay waa sida uu hadalka u dhigaye.
Ciidadamada Xooga dalka ayaa wado Hawlgalo ka dhan ah Al-shabaab kuwaasi oo ay kawadaan deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Previous articleAqriso:Shaqo Joojin Lagu Sameeyey Xogheyihii joogtada ahaa ee Wasaaradda Batroolka iyo Macdanka
Next articleBeesha caalamka oo ku gacan seertay codsigii MW Waare, kuna baaqday in dhamaan DG lala wada heshiiyo
Odayaal Laga Afduubtay Gobolka Shabeelaha Dhexe&Cabsi Xoogan oo Halkaasi Ka Taagan